ANDRO MANERAN-TANY HO AN’NY ZOKIOLONA : Niavaka ny fankalazana
Tsy toy ny isan-taona fa niavaka ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny zokiolona tamin’ity taona ity. 7 octobre 2020
Niahy izany ny Minisiteran’ny Mponina izay notarihin’ny Minisitra, Michelle Angelica. Notohanana, nampiana ary nomena fankaherezana manokana ireo zokiolona tamin’izany. Nanetriketrika ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny zokiolona. Ny 26 septambra lasa teo no nisantarana an’ireo hetsika fankalazana izay notarihin’ny Minisitry ny Mponina, Michelle Angelica tany amin’ny Kaominina Ampasimbe, ao anatin’ny Distrikan’i Fenoarivo Atsinanana.
Lohahevitra noentina nanamarihana izany ny hoe : “Aza atao ankilabao ny zokiolona”. Nandritra izany no nanomezany fotoana 60 minitra ho an’ireo Raiamandreny nihainoana ny hetahetan’izy ireo. “Hajao ny Ray aman-dreninao mba ho lava velona ianao, satria ny Ray aman-dreny dia isany Zagnahary ambonin’ny tany”, hoy ny Minisitra raha nandray fitenenana. Nofaranana tamin’ny fiaraha-misakafo avy eo ny fihaonany mivantana tamin’ireo zokiolona tao Fenoarivo Atsinanana. Taorian’izay ny dia nihazo ny Distrikan’i Mandritsara, Faritra Sofia ny Minisitra niaraka tamin’ireo delegesionina notarihiny nanamarihana ny ivon’ny fankalazana, ny voalohan’ny volana oktobra lasa teo.
Telo andro mialoha an’io dia efa nisy ny hetsika nanomezana tombon-dahiny manokana ho an’ireo zokiolona. Anisan’izany ny fanomezana fizaham-pahasalamana maimaimpoana ho azy ireo. Nisy ny hetsika fijerena maso, fitiliana diabeta sy ny tosidra ary ireo aretina maro samihafa mpahazo ny zokiolona. Ankoatra izay dia nomena ampaham-potoana nitondrany ny hetahetany ihany koa ireo beantitra tao an-toerana. Tsy izay ihany fa nisy ihany koa ny fizaràna bodofotsy miampy fanampin-tsakafo, ka zokiolona miisa 600 no nisitraka izany avy amin’ny Minisiteran’ny Mponina sy ny “fondation Boa” Madagasikara. Nanome voninahitra izany ireo olom-boafidy sy olom-boatendry tao anatin’ny Faritra, toy ny Governora sy ireo ben’ny tanàna amina Kaominina miisa 29 mandrafitra ny Distrika. Ireto farany izay nohararaotina nosalorana samboady tamin’io fotoana io ihany koa. Samy nanindry mafy ny maha zava-dehibe ny tokony hanajana ny zokiolona avokoa ireo rehetra nandray anjara fitenenana. Anisan’izany ny Governoran’ny Faritra, ny sekretera jeneraly eo anivon’ny Minisiteran’ny Mponina.
Nanararaotra nitondra ny anjara birikiny amin’ny fanampiana an’ireo fikambanan’ireo olona manana fahasembanana ihany koa ny Minisitry ny Mponina miaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka. Izy ireo izay notolorana milina fanjaraina, latabatra ary seza. Nofaranana tamin’ny fizaràna nofon-kena mitam-pihavanana hatrany ny lanonana. Saika nanatanteraka hetsika tahaka izany ihany koa ny Faritra rehetra manerana ny Nosy, izay teo ambany fiahian’ny Minisiteran’ny mponina hatrany. Isan’izany ny tany amin’ny Faritra Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana sy Atsinanana. Isan-karazany ireo hetsika natao isam-paritra noentina nanamarihana izany, toy ny fizaràna lelavola mitentina 500 000 Ariary, vary, siramamy, ronono, savony, arovava sy orona.